Article – Page4– King Of Future
Forex နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတရဖွယ်ဆောင်းပါးများနှင့် မှတ်သားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများကို Articles Category အောက်တွင် ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Forex Article Part(20)
စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ? 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ အလွယ်ကူဆုံးအနေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ စျေးကွက်မှာ တန်ဖိုးအတက်အကျကို တွက်ချက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် စျေးကွက်ရဲ့ဂယက်ရိုက်မှုတွေ စျေးကွက်ပုံစံအတက်အကျတွေကို...
Forex Article Part(19)
နည်းစနစ်တကျ နှင့် အခြေခံတကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအား နှိုင်းယှဉ်ခြင်း 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ နည်းစနစ်တကျနဲ့ အခြေခံတကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုတာကတော့ ကုန်သွယ်ရာမှာ အဓိကကျတဲ့ အတွေးနယ်အရင်းအမြစ် ဖြစ်ပါတယ်။နည်းစနစ်တကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများကတော့ စျေးကွက်ရဲ့အတက်အကျကိုကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းမှုပြုလုပ်ကြပြီး...
Forex Article Part(18)
Forexရဲ့အချက်အခြာကျတဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အသိပေးမှုများ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Gross Domestic Product (GDP) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ GDPဆိုတာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု တိုင်းတာရာမှာ အရေးပါဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကို စီးပွားရေးနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးမှာ သုံးပါတယ်။GDPကို...
Forex Article Part(17)
အခြေခံခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ❔ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ အခြေခံခွဲခြား စိတ်ဖြာခြင်း 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ အခြေခံခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဆိုတာတော့ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ စျေးကွက်ကို လေ့လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအချက်အလက်ကတော့ စျေးကွက်မှာရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီစီးပွားရေး...
Forex Article Part(16)
ပညာရှင်ကျကျကုန်သွယ်သူများနှင့် သာမန်ကုန်သွယ်သူများအား နှိုင်းယှဉ်ချက် 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ပညာရှင်ကျကျ ကုန်သွယ်ခြင်းဆိုတာ ယခုမှ စတင် ရောင်းဝယ်ကြမဲ့သူများနဲ့ အမြတ်ရအောင် ကြိုးစားနေသူများအတွက်တော့ ခက်ခဲတဲ့ အရာကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေမှာပါ။ဒါပေမဲ့ သာမန်နဲ့...
Forex Article Part(15)
ပညာရှင်တွေ Forexစျေးကွက်မှာ ဘယ်လိုကုန်သွယ်ကြလဲ? 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ပညာရှင်များ စျေးကွက်အသုံးချ ကုန်သွယ်ကြရာမှာ ခက်ခဲနက်နဲလှတဲ့ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုတာမဟုတ်ဘဲ အခြေခံအချက်အလက်များကို စုဆောင်းကာ ခန့်မှန်းမှုများ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။လေ့လာသူများ ပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့ လွယ်ကူတိုတုတ်တဲ့...
Forex Article Part(14)
Forexမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကုန်သည်တစ်ယောက်ဆိုတာ ဘာလဲ? 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Forexမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကုန်သည်တစ်ယောက်ဆိုတာ ငွေကြေးစျေးနှုန်းအတက်အကျကို လိုက်ပါပြီး အမြတ်ရှာနိုင်သူကို ဆိုလိုပါတယ်။Forexမှာ ဘယ်သူတွေပဲ ကုန်သွယ်ကြပါစေ အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အမြတ်များများရနိုင်အောင်...
Forex Daily Part(12)
Forex မှာစတင်ကုန်သွယ်ခြင်းကို စျေးကွက်မှာယူခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။မှာယူတဲ့စနစ်ဟာ Broker ကြားခံတွေပေါ်မူတည်ပြီး ပုံစံကွဲပြားသွားပါတယ်။ကြားခံသူတွေ အားလုံးကတော့ အခြေခံအားဖြင့် တူညီတဲ့ မှာယူမှုပုံစံ ရှိကြပါတယ်။အထူးမှာယူမှုပုံစံတွေဆိုပြီးတော့လည်း ကွဲပြားတဲ့ပုံစံတွေ ရှိပါသေးတယ်။ 🤩 ကဲ...